GPS တန်ဖိုးနည်းစမတ်နာရီ Leo Sport Sp958 ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ကူပွန်လျှော့စျေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ € 56.75 အတွက် !! | Androidsis
Francisco Ruiz | | reviews, စမတ်နာရီ
အကယ်၍ သင်သည်အားကစားကိုနှစ်သက်ပြီးအထူးသဖြင့်သင်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏စာရင်းဇယားနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်လျှင်သင်ကားတစ်စီးကိုအခါအားလျော်စွာ ၀ ယ်ရန်စဉ်းစားမည်မှာသေချာသည်။ တရုတ်စမတ်နာရီ GPS ကသူတို့သည်၎င်းတို့ရှိကြီးမားသောစျေးနှုန်းများကိုသင့်ကိုပြန်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း အားကစားနာရီများသို့မဟုတ် GPS စမတ်နာရီများ သင်အမှန်တကယ်ထိုက်တန်သောအရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်လျှင်အများအားဖြင့်ယူရို ၂၀၀ အောက်မကျပါစေနှင့်။
ဒီတစ်ကြိမ်၏ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတူ GPS စမတ်နာရီ Leo Sports SP958တရုတ်ကုမ်ပဏီ၏စမတ်နာရီတစ်လုံးဖြစ်သောကုန်ကျစရိတ်နိမ့်ဟုဆိုသော GPS အပြည့်အဝကိုကျွန်ုပ်တို့လုံးဝအပြည့်အ ၀ ဖယ်ရှားပစ်ပါမည်။ သို့မှသာဤအားကစားနာရီများကကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးအားလုံးကိုအသေးစိတ်မြင်နိူင်သည်။ များသောအားဖြင့်ယူရို ၁၀၀ အောက်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်၊ ဤကိစ္စတွင်ယူရို ၉၁.၂၅၊ ယခုနှင့်သြဂုတ်လကုန်အထိသင်သည်အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ယူရို ၅၆.၇၅ သာသာရှိပြီးကူပွန်မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ES56.75ကာယလှုပ်ရှားမှုလက်ကောက်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကုန်ကျတာထက်အနည်းငယ်ပိုပါတယ်၊ GPS Smartwatch တစ်ခုလုံးသယ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ ဒီတော့အခုသင်သိပြီ၊ သင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုလက်ကောက်တစ်ခု၊ အားကစားနာရီတစ်လုံးသို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းသောစမတ်နာရီတစ်ခုကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေပြီးသင် Leo Sports SP958 ကိုစဉ်းစားမိသည်နှင့်သင် terminal ကိုဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီသင်က ကျွန်တော်တို့ကိုဒီစက်ကနေနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့အရာအားလုံးနဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။
ပုံတစ်ပုံသည်စကားလုံးတစ်ထောင်တန်မည်မျှတန်ဖိုးရှိပုံ၊ သို့ဆိုလျှင်၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ထိုနေရာတွင်ပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ စာမူကိုအနတ္တစကားလုံးများသို့မဟုတ်လှပသောစကားလုံးများဖြင့်မဖြည့်ခင်ကျွန်ုပ်တို့လက်ပတ်နာရီကိုအကုန်အကျများစွာရောင်းလိုကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို Leo Sports SP958 GPS Smartwatch မှပေးထားသောကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကိုအကျဉ်းချုပ်စာရင်းအဖြစ်ထားခဲ့ရန်သင်ရွေးချယ်ပါမည်။ သို့မှသာသင်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။.
ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်သည်ဤစာမူ၏အစတွင်သင့်အားထားခဲ့သည့်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည် တစ်နာရီနီးပါးကြာသော terminal ၏အလွန်ပြီးပြည့်စုံသောဗွီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုသင်တို့အား၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ပြသသည်ဒီဇိုင်းဖြင့်စတင်ခြင်း၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားအရေအတွက်တိုင်းတာသည့်နာရီ၊ အားကစားနာရီနှင့်ဖုန်းနာရီကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ထုတ်ကုန်များရှိနာရီအချက်အလက်အားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်လျှောက်လွှာကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုသည်။
ထို့အပြင်၎င်းတွင် GPS နှင့် aGPS တို့ပါ ၀ င်သည့်အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲ၎င်းကိုလုံးဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလမ်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ရန် MicroSIM ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ 2G ဆက်သွယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့်ရိုးရာ SMS ကိုပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းတို့အားခွင့်ပြုသည် စမတ်ဖုန်းကိုအချိန်မရွေးသင်နှင့်အတူသယ်ဆောင်ရန်မလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ကာယလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း။
ဒီကူပွန်ဖြင့်ဝယ်ယူပါ - ES0024 ကို ၅၆.၇၅ ဒေါ်လာသာရှိသည်
1 Leo Sports SP958 GPS Smartwatch နှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအရာများ
2 GPS Smartwatch Leo Sports SP958 နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကောင်းသောအရာများ
4 Leo Sports SP958 GPS Smartwatch application ကို download လုပ်ပါ
Leo Sports SP958 GPS Smartwatch နှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအရာများ
၁.၃ လက်မ 1.3x240p TFT မျက်နှာပြင်သည်တောက်ပသောနေရောင်ခြည်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်
2G ဆက်သွယ်မှုကို MicroSIM slot မှတစ်ဆင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်သကဲ့သို့ SMS ပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်
ငါတို့အကြိုက်ဆုံးဂီတကိုသယ်ဆောင်။ ၎င်းကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်စပီကာသို့မဟုတ် Bluetooth မှတဆင့်နားထောင်နိုင်ရန်အတွက် microSD ကို 32 Gb အထိထည့်သွင်းနိုင်သည်
Built-in GPS နှင့် aGPS
တွဲဆက်ထားသောစမတ်ဖုန်းမှအသိပေးချက်များကိုလက်ခံခြင်းနှင့်အခြားကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းသို့မဟုတ်အထူးအက်ပ်များနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းအတွက် Bluetooth 4.0
အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်တွင်နောက်ဆုံး ၇ ရက်၏စာရင်းဇယားများကိုသိမ်းဆည်းသည်
လျင်မြန်စွာ Settings ကိုထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ
GPS Smartwatch Leo Sports SP958 နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကောင်းသောအရာများ
အတော်လေးကြီးမားတဲ့ device ကို
အလေးချိန် 80 ဂရမ်
စမတ်ဖုန်းနှင့်သီးခြားစီခွဲနေချိန်တွင်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ခက်ခဲသည့် Bluetooth ဆက်သွယ်မှုသည်အလွန်များသဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်နာရီကိုပိတ်ထားရန်နှင့်ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်တော်မကြိုက်သည့် Magnetic charger ကိုသင်ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ထားကြောင်းသေချာအောင်မပြုလုပ်ပါကသင်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်၎င်းကိုအားသွင်းစရာမလိုဘဲအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်။
အသံဆူညံသံများသောနေရာများရှိဖုန်းများဖြေဆိုရန်မသင့်တော်သောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ပါ ၀ င်သောစပီကာအသံပမာဏ
GPS စမတ်နာရီ Leo Sports SP958
သုံးသပ်ချက် - Francisco Ruiz Antequera နေရာချထားပုံ
ဒီကုဒ်ကိုဝယ်ပါ - ES0024
Leo Sports SP958 GPS Smartwatch application ကို download လုပ်ပါ
FunDo Pro ကို
ရေးသားသူ: Shenzhen Fen Yun နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » GPS တန်ဖိုးနည်းစမတ်နာရီ Leo Sport Sp958 ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ကူပွန်လျှော့စျေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ € 56.75 အတွက် !!
ကူညီပါ၊ ပိတ်ထားပါပြီ၊ အခုဖွင့်မထားဘူးဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမသိဘူး